नेकपाका दुबै पक्ष आ–आफनै रणनीतिमा, सांसदहरु एउटै रोष्टममा बस्लान कि अलग ? – Mission Khabar
नेकपाका दुबै पक्ष आ–आफनै रणनीतिमा, सांसदहरु एउटै रोष्टममा बस्लान कि अलग ?
मिसन खबर २० फाल्गुन २०७७, बिहीबार १८:३५
काठमाडौं । फागुन २३ गते संसद बैठक बस्ने निश्चित भएसंगै सत्तारुढ नेकपाका दुवै समुह रणनीती बनाउन जुटेका छन । आन्तरिक रुपमा दुवै समुह कमजोर हुने हो कि भन्ने त्रासमा रहेपनि आफूतिर संसदीय दलमा बहुमत भएको दावी गरिरहेका छन् ।
भिन्नाभिन्नै तरीकाले आफ्ना कामकारवाही अगाडी बढाईरहेका नेकपाका दाहाल–नेपाल समुह र ओली समुह राष्ट्रिय राजनीतीमा दुई विपरीत धुव्रमा देखिएका छन् । औपचारीक रुपमा विभाजीत नभएका भएपनि नेकपाका यी दुई समुहहरुका बिचमा एउटा पार्टी जस्तो कुनै गतिबिधि देखिदैन । बरुदुवै समुहले एक अर्का पक्षका शिर्ष नेता देखि केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश कमिटी सदस्यहरुलाई निरन्तर कारवाही गरेर आफू बिरोधीलाई सिध्याउने गतिबिधि जारि राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले संसद बैठक सुरु हुदा सम्म पनि राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रश्ताव मार्फत हटाउने दाहाल–नेपाल समुहको तयारी छ । अविश्वासको प्रश्तावको निम्ती आफुसंग प्रयाप्त सांसद नरहेकाले प्रतिपक्षी कांग्रेस र जसपाको समर्थन जुटाउन यो समूह लागिपरेको छ ।सरकारको नेतृत्व गरीरहेका केपी शर्मा ओलीले बारम्बार राजीनामा नदिने बताउदै आईरहेका छन् । दाहाल–नेपाल समुहले भने संसदीय दलको नेताबाट केपी शर्मा ओलीलाई कारवाही गरीसकेको छ । तर पनि आफुहरु संग बहुमत सांसद रहेको ओली पक्षको दावी छ । संसदमा अविश्वासको प्रश्ताव सामना गर्ने अवस्था आएमा पनि अधिकांश सांसद प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उभिने र उक्त प्रश्ताव असफल हुने विश्वासमा नेताहरु छन् ।
पानी बाराबारको अवस्थामा पुगेका नेकपाका दुई समुहबीच एकताको कुनै सम्भावना देखिदैन । आउँदो संसद बैठकमा एकअर्कालाई कमजोर देखाउने तयारीमा जुटेका दुई समुहमा को बलियो हेर्न आइतबारको बैठक कुनुपर्ने हुन्छ । अझ संसद बैंठक सुरु हुँदा पार्टी विभाजन नै नभएका यी दुई समूहका सांसद एकै ठाउँमा बस्छन वा प्रतिपक्षीको स्थानमा हेर्न बाँकी नै छ ।